Soo dejisan Android Studio 3.6 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Android Studio
Android Studio – jawi horumarka isku dhafan oo dhan sifooyinka loo baahan yahay si ay u horumariyaan codsiyada Android. software wuxuu isticmaalaa emulator ah oo taageero u ah febwari badan oo ka mid ah qalabka Android si loo bilaabo iyo tijaabin codsiyada. Android Studio waa ay awoodaan in ay la socdaan waxqabadka codsiga abuuray, u arkaan ay interface aan bilaabay emulator ama qalabka jirka, qalabayn nidaamka dhismaha, abuurin versions kala duwan ee codsiga hal, iwm Android Studio ku jira editor caqli badan taas oo si toos ah u khusaysaa ay formatting lagama maarmaan iyo style code ku xiran tahay luqadda barnaamijyada iyo leedahay analyzer ka guurto ah in la ogaado ay khaladaad ka iman karta code isha. Sidoo kale Android Studio taageertaa tiro ka mid ah arrimo la goobaha la aasaasay si ay u abuuraan codsiyada aasaasiga ah.
Tusaale fiican oo ka mid ah febwari kala duwan oo ka mid ah qalabka Android
editor code Intelligent
set Advanced qalabka dhismaha ku salaysan Gradle ah
Dhisay-in analyzer code
Range habyaalada iyo is-dhexgalka la GitHub
Soo dejisan Android Studio
Faallo ku saabsan Android Studio
Android Studio Xirfadaha la xiriira